Cele News – Maythadin
May Thadin | October 18, 2021
Unicode ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် အနုပညာရှင်များထဲမှ ၂၄ဦးနှင့် လူမှုကွန်ရက်တွင် လူသိများသူ ၁၀ဦးတို့၏အမှုများအား ပိတ်သိမ်း ရန်ကုန်၊အောက်တိုဘာ ၁၈ရက် ယနေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရ လူဦးရေ ငါးထောင်ကျော်ထဲတွင် အနုပညာရှင်အချို့နှင့် လူမှုကွန်ရက်ပေါ် လူသိများသူ အချို့ ပါဝင်သည်ဟု နစက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောသည်။ အနုပညာရှင် (၂၄)ဦးနှင့် လူမှုကွန်ရက်တွင်လူသိများသူ (၁၀)ဦးတို့အပေါ် အရေးယူထားသည့် အမှုများအား
Unicode မဂ်လာပါပရိတ်သတ်ကြီးရေမင်းသမီးလေးသဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကတော့အသံဝဲဝဲလေးနဲ့အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးပါ။ သူမရဲ့မိသားစုဘဝလေးကတော့အရမ်းကိုအားကျချင်စရာကောင်းလောက်အောင်သာယာပျော်ရွှင်လှပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားသားမီးမီးလေးနဲ့ပဲ အချိန်ပေးဖြစ်နေပြီ းအနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားထားနာတောင်သူမချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့အမြဲဆက်သွယ်လုပ်နေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အနုပညာလောကမှာအရင်ကလိုအချိန်ပြည့် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ပေမယ်လည် းသူမကတော့ တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ထိတွေ့နေစမြဲပါပဲ။ ယခုအခါမှာတော့လောကကြီးမှာစ.က်ဆု.တ်ရွ.ံရှာဖွယ်လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့်သူမဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုစေ.ာ်က.ားခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းသူမကတော့မို.က်ရို.င်းစွာတုန့်ပြန်ခြင်းမရှိပဲပညာသားပါပါပဲပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်သူမကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သိက္ခာချသလဲဆိုတာပြသလာခဲ့ပါတယ်။ “တဏှ.ာရူ.းတာကလည်းတော်ရုံပဲကောင်းတယ်။ သမီးကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ပုံကိုphotoshopပြီးလာပို့နေတယ်သူတောင်.းစ.ား။ ဒီပုံပြန့်လာရင်ဘေးကပုံပါတွဲကြည့်လို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ မြန်မာပြည်ကြီးလဲအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင် လက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွ.တ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ Credit Zawgyi မဂ္လာပါပရိတ္သတ္ႀကီးေရမင္းသမီးေလးသၪၨာႏြယ္ဝင္းကေတာ့အသံဝဲဝဲေလးနဲ႕အရမ္းကိုခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့မင္းသမီးေလးပါ။ သူမရဲ႕မိသားစုဘဝေလးကေတာ့အရမ္းကိုအားက်ခ်င္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္လွပါတယ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့သားသားမီးမီးေလးနဲ႕ပဲ အခ်ိန္ေပးျဖစ္ေနၿပီးအႏုပညာအလုပ္ေတြရပ္နားထားနာေတာင္သူမခ်စ္တဲ့ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႕အၿမဲဆက္သြယ္လုပ္ေနတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ အႏုပညာေလာကမွာအရင္ကလိုအခ်ိန္ျပည့္အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြမလုပ္ေပမယ္လည္းသူမကေတာ့တစ္နည္းနည္းနဲ႕ေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႕ထိေတြ႕ေနစၿမဲပါပဲ။ ယခုအခါမွာေတာ့ေလာကႀကီးမွာစ.က္ဆု.တ္႐ြ.ံရွာဖြယ္လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္သူမဂုဏ္သိကၡာေတြကိုေစ.ာ္က.ားခံလိုက္ရပါတယ္။ဒါေပမယ့္လည္းသူမကေတာ့မို.က္ရို.င္းစြာတုန႔္ျပန္ျခင္းမရွိပဲပညာသားပါပါပဲပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္သူမကိုဘယ္လိုပုံစံနဲ႕သိကၡာခ်သလဲဆိုတာျပသလာခဲ့ပါတယ္။ “တဏွ.ာ႐ူ.းတာကလည္းေတာ္႐ုံပဲေကာင္းတယ္။ သမီးကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့ပုံကိုphotoshopၿပီးလာပို႔ေနတယ္သူေတာင္.းစ.ား။
Unicode အဆိုတော် ကျားပေါက်အား မိဘများမှ အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညာ ဧရာဝတီ၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အဆိုတော် ကျားပေါက်အား ဖခင်ဖြစ်သူ အဆိုတော် ရင်ဂိုနှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မွန်မွန်ကျော်တို့က သားအဖြစ်မှ အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညာစာအား ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ​ဖော်ပြထား
Unicode မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှူသူသန်းချီသွားတဲ့ အဆိုတော်ဒေးဗစ်လှိုင်နှင့်PDFလူငယ်တို့သီဆိုထားတဲ့ “ပေးဆပ်ခြင်း”သီချင်းဗွီဒီယို အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှူသူသန်းချီသွားတဲ့ အဆိုတော်ဒေးဗစ်လှိုင်နှင့် PDFလူငယ်တို့သီဆိုထားတဲ့ “ပေးဆပ်ခြင်း”သီချင်းဗွီဒီယို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှူသူသန်းချီသွားတဲ့ အဆိုတော်ဒေးဗစ်လှိုင်နှင့် PDFလူငယ်တို့သီဆိုထားတဲ့ “ပေးဆပ်ခြင်း”သီချင်းဗွီဒီယို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှူသူသန်းချီသွားတဲ့ အဆိုတော်ဒေးဗစ်လှိုင်နှင့် PDFလူငယ်တို့သီဆိုထားတဲ့ “ပေးဆပ်ခြင်း”သီချင်းဗွီဒီယို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှူသူသန်းချီသွားတဲ့ အဆိုတော်ဒေးဗစ်လှိုင်နှင့် PDFလူငယ်တို့သီဆိုထားတဲ့ “ပေးဆပ်ခြင်း”သီချင်းဗွီဒီယို ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် Zawgyi မိနစ္ပိုင္းအတြင္းၾကည့္ရႉသူသန္းခ်ီသြားတဲ့ အဆိုေတာ္ေဒးဗစ္လွိုင္ႏွင့္ PDFလူငယ္တို႔သီဆိုထားတဲ့ “ေပးဆပ္ျခင္း”သီခ်င္းဗြီဒီယို
May Thadin | October 17, 2021
Unicode “ကျားပေါက်ရဲ့ ukulele အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇,၅၀၀ နဲ့ ကမ္ဘာ့ စျေးအကြီးဆုံး ukulele အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်” အဆိုတော် ကျားပေါက်ရဲ့ Ukuleleကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇,၅၀၀ (ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ကျော်)နဲ့ လေလံတင်ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ စျေးအကြီးဆုံး ukulele အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၅၀၀နဲ့
မြန်မာငွေ သိန်း(၂၀၀)ကျော်ကို နာရီပိုင်းအတွင်လေလံကြေးရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ တေးသံရှင်ကျားပေါက်(ဟန်ထူးလွင်)ရဲ့ဂီတာလေး
Unicode ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့နာရီပိုင်း အတွင်းသိန်း၂၂၀ကျော်လေလံကြေးရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ကျားပေါက်ရဲ့ဂီတာလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ နံနက်ခင်းလေးကိုUSD11111နဲ့စဖွင့်လိုက်ပါပြီ၊ကိုကျားရဲ့ဂစ်တာလေလံစျေးနှုန်းဟာအခုဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သောင်းတစ်ထောင်တစ်ရာတစ်ဆယ့်တစ် မြန်မာငွေ၂၂၂၂၂၀၀၀ဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ လေလံဆွဲသူတွေကတော့အလျှော့ပေးမယ့်ပုံစံမပေါ်ကြသေးပါဘူး EndGameမှာကြမ်း ဖို့များ အချိန်တွက်နေကြလားမှတ်ရပါတယ်။ လွယ်အိတ်ကြီးထဲကထွက်လာတဲ့ဂစ်တာအသေးလေးရဲ့တော်လှန်ရေးတန်ဖိုးပေါ့ ဂုဏ်ယူရပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်နော်။ Credit: Zawgyi ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္ေတာ့နာရီပိုင္း အတြင္းသိန္း၂၂၀ေက်ာ္ေလလံေၾကးရရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အဆိုေတာ္က်ားေပါက္ရဲ႕ဂီတာေလးအေၾကာင္းကိုေျပာျပေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ နံနက္ခင္းေလးကိုUSD11111နဲ႕စဖြင့္လိုက္ပါၿပီ၊ကိုက်ားရဲ႕ဂစ္တာေလလံေစ်းႏႈန္းဟာအခုဆိုရင္အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္တစ္ရာတစ္ဆယ့္တစ္ ျမန္မာေငြ၂၂၂၂၂၀၀၀ဝန္းက်င္ကိုေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ေလလံဆြဲသူေတြကေတာ့အေလွ်ာ့ေပးမယ့္ပုံစံမေပၚၾကေသးပါဘူး EndGameမွာၾကမ္း ဖို႔မ်ား အခ်ိန္တြက္ေနၾကလားမွတ္ရပါတယ္။ လြယ္အိတ္ႀကီးထဲကထြက္လာတဲ့ဂစ္တာအေသးေလးရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးတန္ဖိုးေပါ့ ဂုဏ္ယူရပါတယ္ဆိုၿပီးေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။ Credit:
မအူဝဲနဲ့အတူ ညစာစားပွဲတစ်ခုမှာ ပျော်ရွှင်စွာသီချင်းတွေဆိုပြီး ကခဲ့ကြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို အလွမ်းပြေတင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
Unicode မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ရွေရည်ကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ၂၀၀၅မှာကြော်ငြာရေပန်းစား နဲ့မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ် ၂၀၁၃မှာတော့သူမဟာရုပ်ရှင်တွေစတင်ရိုက်ကူးပါတော့တယ်၊၂၀၁၈မှာတော့သူမဟာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆုကြီး ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် တစ်ချို့သောအနုပညာရှင်များလည်း ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအချင်းချင်းလည်း လွမ်းနေမှာအသေချာပါပဲနော်. ဒီနေ့လေးမှာလည်း ဝတ်မှုန်ရွှေရည်က အနုပညာအစ်မဖြစ်တဲ့ အူဝဲအကယ်ဒမီရတဲ့နေ့တုန်းက ညစာစားပွဲ လုပ်တဲ့နေ့တုန်းက အတူတွဲကထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်လာပြီး လွမ်းတယ်ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ရေးတင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူမ တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာတော့ပရိသတ်တွေက
Unicode သူရဲ့ ဗွီဒီယိုအောက်မှာ ဆဲဆိုနေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ရစရာမရှိအောင်ပြန်ဆဲဆိုလိုက်တဲ့ နေဒွေး မင်းသားချောနေဒွေးကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အချစ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့ မင်းသားချော တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. နေဒွေးကတော့ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်း ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့် သူပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. နေဒွေးကတော့ အနုပညာမှာလည်း ထူးချွန်သလို ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ အကျီနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနုပညာခံယူချက်တွေက မဲနေမှန်း အခုမှသိတော့တယ် မမကြူရေလို့ ထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့ ကိုဘင်း.
Unicode ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနုပညာခံယူချက်တွေက မဲနေမှန်း အခုမှသိတော့တယ် မမကြူရေလို့ ထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့ ကိုဘင်း.. သရုပ်ဆောင်ကိုဘင်းကတော့ ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းသရုပ်ဆောင် ပီပြင်လှတာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ကိုဘင်းကကျနော်တို့ခံယူခက်နဲ့အနုပညာတွေဟာ မဲနေမှန်းအခုမှသိတယ်လို့ဆိုပြီးအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ကိုဘင်းကအင်း ကျနော်တို့ခံယူချက်နဲ့အနုပညာတွေဟာမဲနေမှန်းခုမှပဲသိလိုက်ရတော့တယ်မမကြူရေ၊ အဲမမကြူကြူသင်းကိုပြောပြတာပါဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit Zawgyi ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အႏုပညာခံယူခ်က္ေတြက မဲေနမွန္း အခုမွသိေတာ့တယ္ မမၾကဴေရလို႔ ထိထိမိမိေျပာလိုက္တဲ့ ကိုဘင္း..
မြန်မာပြည်မှာ သူနဲ့တန်တဲ့ယောက်ျား မရှိသေးဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
May Thadin | October 16, 2021
Unicode ရွှေအိမ်စည်ဟာ Miss Grand International ပြိုင်ပွဲ အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ခါနီးမှာမှ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ပြဿနာကြောင့် သူမရထားတဲ့ အလှမယ်သရဖူကို ပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရတာပါ အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲ အပြီးမှာတော့ ဒါဟာ Miss ပြိုင်ပွဲကို တကျော့ပြန်လည် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်း အားလုံးကမျှော်လင့် ထားသလိုပဲ Miss Golden Land Myanmar